Ukuba ukubala kwakho kukuvumele ukuba ugqibe ekubeni ukuya esikhathini kukulibazisekile, kwaye uvavanyo lokukhulelwa luqinisekisile isizathu sokulibaziseka, ngokukhawuleza uza kutyelela okokuqala kwi-gynecologist ngexesha lokukhulelwa. Kwiinyanga ezilisithoba ezalandelayo uya kuba phantsi kweliso lugqirha, ozama ukubeka ikhondo lokukhulelwa nokubeka uphuhliso oluqhelekileyo lomntwana ongakazalwa.
Kukho uluhlu lwabasetyhini abafuna ukubhalisa kunye nomntwana wesifo somzimba ngosuku lokuqala lokubambezeleka kokuya esikhathini okanye abanye ababhalisa kwinyanga ngaphambi kokubeletha. Ukugqithisa okunjalo akunangqiqo kwaye awufumani izizathu. Kukulungele ukubhalisa kunye nomzimba wesifo somzimba malunga neveki yesibhozo yokukhulelwa kwaye ungalibali ixesha elide kwiveki yeshumi elinesibini. Kutheni ixesha elilinganiselwe kangaka? Kukho izizathu ezintathu zezi zinto:
Ukuxilongwa kwangaphambili kokukhulelwa kunokuphelisa ukukhulelwa kwe-ectopic;
Kwiinyanga ezintathu zokuqala kukho ithuba lokufumanisa ngokupheleleyo umama nomntwana kunye nokufumana unyango, ukuba kuyimfuneko;
iindleko ezongezelelweyo zemali zokubhalisa kwangethuba okanye ukuhanjiswa ngokukhawuleza kweemvavanyo kunye nokuhamba kwazo zonke iinkqubo zokutyelela kade ugqirha.
Kukho uhlobo lomvuzo (inzuzo) oomama abazayo abhalise kunye nomdlavuza wegazi phambi kwexesha elilodwa lezithuba ezilishumi elinesibhozo seminyaka, kwimivuzo yomvuzo omnye (SMIC).
Ukutyelela kokuqala kwintsholongwane yomzimba uza kuyidinga:
Iingxelo zonyango zonyango, njengezibhedlele zesibhedlele kwimbali yokugula (ukuba kwakukho izibhedlele ngaphambili), iziphumo zophando zangaphambili kunye nokuhlalutya, iingcamango zonyango zeengcali (unokwenza iikopi zeefoto zangaphambili).
Kufuneka ukuba uhlale uhamba nawe kwi-gynecologist ikhadi leshintshiselwano, oza kunikwa emva kokuba ubhaliswe. Leli khadi ligxininiso eliphambili lomfazi okhulelweyo.
Ngaphambi kokutyelela umthinteli-gynecologist ungenza uluhlu lwemibandela enomdla uze ubhale iingcebiso zokugqibela kwincwadi.
Uya kufuna iiglavu ezilahlayo kunye ne-diaper.
Kubalulekile ukwazi ukuba unesihlandlo sokugqibela, ukuhamba kwayo kunye nobude bexesha lokuya esikhathini. Ukuze uphephe umngcipheko wokupheliswa kokukhulelwa, kuyimfuneko ukuhlawula ukutyelela kwi-gynecologist ngaloo mihla apho kungabikho ixesha lokuya esikhathini ngokokubala kwekhalenda ukuba awuzange ukhulelwe. Ngaloo mihla apho ixesha lokuya esikhathini kufuneka libhekiswe njengengozi ekuphuhlisweni kwengane, kwaye ukungenelela kunye neemviwo kungabangela ingozi yokusweleka. Ukuze uphephe umngcipheko, kubalulekile ukuphawula kwikhalenda imihla elindelekileyo yokuya esikhathini.
Ngaphandle kokubonakaliswa kweentloni, cela ugqirha wakho malunga neempawu zesenzo sezesondo ngexesha lokukhulelwa kwaye ungagcini ulwazi malunga nempilo yakho. Musa ukwesaba ukugwetywa kwegazi, uya kukuxelela kwaye ancede kwimicimbi eyahlukeneyo, ukuba unengcali eqeqeshekileyo.
Ungesabi uvavanyo lwe-gynecological kwaye ungazichukumisi ukuba uzive ungathandeki kwaye uzive ubuhlungu. Kubalulekile ukukhuphela ukudibanisa ngokwesondo ngexesha lokugqibela, ngenxa yokuba Uhlalutyo lungafanelekanga, ngenxa yobungqina obunokwenzeka bokungena komzimba kwisisu. Kuyimfuneko ukuba ube nesilwanyana esingenalutho kunye nesilonda esingenalutho, kuba ukuzaliseka kwabo kunokuphazamisana novavanyo oluqhelekileyo lombuso wezakhiwo zenkqubo yokuzala xa kuhlolwa. Kufuneka uhlambe. Gqoka iimpahla ezicocekileyo. Kubalulekile ukuba ubuyele kwindlu yangasese ukuba ukutyelela ugqirha kubambezeleka ngenxa yobude bomgca okanye uhambo olude.
Ngeenkqubo zokucocwa ngokusondeza, musa ukutyhila; iphazamisa i-microflora yesini, kwaye ngenxa yoko, iziphumo zeemvavanyo ziza kubonisa iziphumo ezingalunganga, kwaye ugqirha akayi kuba nako ukucacisa uhlobo lokukhulelwa kwesisu.
Into ebaluleke kakhulu kukuba kufuneka ube nethemba elipheleleyo kwigqirha, isimo sengqondo esihle kunye nomnqweno wokuba umntwana onempilo. Ukuze ukwazi ukuzola nokuzithemba kwindlela eqhelekileyo yokukhulelwa kunye nokuzalwa kwangaphambili, kuyimfuneko ukuthatha indlela enoxanduva lokukhetha ugqirha kunye nekliniki, apho uza kujonga ikhosi yokukhulelwa kwakho.
Usulelo lwe-Urinary kunye nokukhulelwa
Ungazihlambulula njani emva kokukhulelwa?
Ikhalenda yokukhulelwa: iiveki ezingama-24
Ikhalenda yokukhulelwa: iiveki ezili-10
Iimveliso ezinonophelo zoononomama
Inkukhu ngamakhowe kunye ne-Mozzarella ushizi
Umlenze weMvana ophekwe kwi-oven
Ingaphakathi kwibhebha elincinci
Ukuhlawula ngokufanelekileyo izandla, inyawo kunye nomntwana
Yiyiphi i-manicure eyenza imfashini ngo-2010?
Yintoni yatshintshile ekubonakaleni kukaMaria Gorban: iifoto ngaphambi nangemva kweeplastiki